ပထမဆုံးဒိတ်လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပြောကြမလဲ ? | Buzzy
ပထမဆုံးဒိတ်လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပြောကြမလဲ ?
အွန်လိုင်းမှာချစ်ကြိုက်ကြပြီး အပြင်မှာတွေ့ဆုံဖို့ချိန်းကြတဲ့အခါဘယ်သူမဆို စိတ်လှုပ်ရှားမှုအနည်းနဲ့အများရှိကြပါတယ်။တစ်ချို့ကလည်း လိုင်းပေါ်မှာသာစကားအများကြီးပြောပြီး အပြင်မှာပြောဖို့မရဲကြပါဘူး။ တစ်ချို့ကလည်းအပြင်မှာတွေ့ရင်ဘာပြောရမလဲမသိဘူးဆိုပြီး စဉ်းစားရခက်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးဒိတ်လုပ်တဲ့အခါအနေရမခက်စေဖို့ ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်။အရင်ဆုံးသင်တို့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့ အကြောင်းတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရယ်စရာအမှတ်တရတွေအကြောင်းပြောပါ။ ရယ်မောတာကပိုပြီးရင်းနှီးလာစေပါတယ်။
ဒါကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ကိုယ်နဲ့တွဲနေတဲ့သူတွေရဲ့ တစ်နေ့တာအချိန်စာရင်းတွေ၊တစ်နေ့တာအကြောင်းတွေကိုသိချင်ကြမှာပါ။ အဲ့ဒါမှအားတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဆက်ဖို့၊စကားပြောဖို့၊အပြင်ထွက်ဖို့အကြောင်းတွေကိုစပ်ဆက်မိပြီးပြောဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အကြိုက်ဆုံးနေရာ၊အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ၊အကြိုက်ဆုံးသီချင်းစသဖြင့် ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းကိုပြောပါ။နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့တဲ့အခါ ပိုပြီးရင်းနှီးအောင်သူအကြိုက်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးလို့ရတာပေါ့။
သူ့မိသားစု၊ကိုယ့်မိသားစုအကြောင်းဆွေးနွေးတာကရေရှည်အတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။မိသားစုတွေအကြောင်း စောစောသိထားတော့ ပိုပြီးရင်းနှီးသွားသလိုခံစားရစေပါတယ်။
ဒါကတော့ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တွေ့ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။သူ့အားလပ်ရက်မှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းလဲမေးပြီး အားလပ်ရက်မှာသူနဲ့တွေ့ချင်လားမေးပါ။ အဲ့ဒါမှပိုပြီးရင်းနှီးမှုရှိလာစေမှာပါ။